ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးကူညီမှု - Shanghai Jiahang Instruments Co., Ltd.
နေအိမ် > ကြှနျုပျတို့အကွောငျး >ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှု
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
သင့်ထံမှ ကြားနာရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသည့်အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ â€ „ဖောက်သည်များအတွက် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှု” သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး၊ အထိရောက်ဆုံးနှင့် သုံးစွဲမှုအနိမ့်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော သုံးစွဲသူများအားလုံးအား သေချာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဖောက်သည်များအားလုံးအား ကတိပြုပါသည်။ ဖောက်သည်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွား။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် မူရင်းထုတ်လုပ်မှဖြစ်ပြီး စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို သုံးစွဲသူများထံ ပံ့ပိုးပေးကြောင်း အာမခံပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အသုံးပြုသူ၏လက်စွဲအားလုံးသည် စာချုပ်၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပုံမှန်အတိုင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းအတွက် ပြည့်စုံ၊ ရှင်းလင်းပြီး မှန်ကန်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံချက်: 12 လ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု၊ နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံစသည်ဖြင့် တာဝန်ယူပေးသော အရောင်းအပြီးဌာနကို တည်ထောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာသည် ဖောက်သည်များကို အချိန်မရွေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး သုံးစွဲသူများအား ဖုန်း၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖြစ်နိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တူရိယာများကို ကူညီပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည် နောက်ဆက်တွဲတုံ့ပြန်ချက်များကို အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အားနည်းချက်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ- ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးများသော အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို သိုလှောင်ထားပြီး ဖောက်သည်များအတွက် ပြဿနာများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရန် အာမခံပါသည်။
အသုံးပြုသည့်ကာလတစ်လျှောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး အသုံးပြုသူထံမှ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်မှုပေးရမည်။
teh ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံမှန်ပေးပို့သည့်ကာလနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း၊
မိုဘိုင်း-+86 17721148861(24 နာရီ)
3. သင်္ဘော/လေကြောင်း ပို့ဆောင်ခြင်း။
4. Jiahang Logistics ရေယာဉ်စု
ချစ်လှစွာသော customers များ ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို Long view ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ယုံကြည်စွာ ကြည့်ရှုမှုအတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ရှန်ဟိုင်းဧရိယာအပြင်ဘက်ရှိ ဖောက်သည်များအတွက်၊ သင်ဝယ်ယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ပထမဆုံး ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသုံးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံကျင့်သုံးပါမည်။
1. အောင်မြင်သောအမှာစာပြီးနောက်၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုသည် ဆိုက်ရောက်မည့်အချိန်ကို မျှော်လင့်ထားသည့်နည်းလမ်းကို သင့်အား အကြောင်းကြားပါမည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးပို့ချိန်သည် သင့်တွက်ချက်ထားသော အချိန်၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ငွေပေးချေမှုအပေါ် မူတည်ပြီး၊ သင့်ထုတ်ကုန်များကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ရရှိစေရန်အတွက်၊ အချိန်မီ ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ပါ။
3. အချိန်မီပေးပို့ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ မှာယူမှုတွင် တိကျသောအသေးစိတ်လိပ်စာနှင့် မှန်ကန်သောဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
4. နေ့တိုင်း ကြီးမားသော ပို့ဆောင်မှုများ၊ ဂိုဒေါင်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းများ မှာယူပြီးနောက် တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ပေးမည်၊၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အမြန်ပို့ဆောင်မှု ပုံမှန်အားဖြင့် 2-7 ရက် (သင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်၍) သင့်သတ်မှတ်ထားသော တည်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များအားလုံးအတွက်ဘဏ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့က ဤဥပဒေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ၎င်းသည် သတ်မှတ်ထားသော တစ်ခုတည်းသော လက်ခံအကောင့်ဖြစ်ပါသည်။SHANGHAI JIAHANG INSTRUMENTS CO.,LTD.ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုချက်မပါဘဲ မည်သည့်ပုံစံနှင့် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အခြားအကောင့်များသည် တရားမဝင်ပါ။
အကျိုးခံစားခွင့်ကုမ္ပဏီ- Shanghai Jiahang Instruments Co.,Ltd
အကျိုးခံစားခွင့်ကုမ္ပဏီလိပ်စာ- 8 Building No.3570 Jiasong North Road, Jiahang District, Shanghai, China
အကျိုးခံစားခွင့်ဘဏ်- တရုတ်ဘဏ်ခွဲ ရှန်ဟိုင်းဘဏ်ခွဲ Jiading ဘဏ်ခွဲ
အကျိုးခံစားခွင့်ဘဏ်လိပ်စာ : No.451 Tacheng Road, Jiading District, Shanghai, China
SWIFT ကုဒ်- BKCHCNBJ300
လေးစားအပ်ပါသော Customer များ၊
Jiahang Complaint Center မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုင်ကြားချက်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြဿနာများကို ဤနေရာတွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ လုပ်ငန်းရက်အတွင်း ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် သင့်နောက်လိုက်ပါမည်။
ဆက်သွယ်ရန်- Mr Tian
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်ကြားချက် တယ်လီဖုန်းသို့လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။